အမရေိကနျမှာ ကိုဗဈ ကာကှယျဆေး အထိုးခံပွီး တဲ့ မွနျမာ ဆရာဝနျတဦး ပွောပွတဲ့ ကာကှယျဆေး အကွောငျး – Shwe Naung
အမရေိကနျမှာ ကိုဗဈ ကာကှယျဆေး အထိုးခံပွီး တဲ့ မွနျမာ ဆရာဝနျတဦး ပွောပွတဲ့ ကာကှယျဆေး အကွောငျး
ကာ ကှယျဆေး ဘယျလောကျေ ကာငျးလဲ။ ဘယျသူေ တှ ထိုးနိုငျလဲ။ ဘာတှေ ပွငျဆငျ ထားသငျ့လဲ ဆိုတာကို မွနျမာလို အတိုခြုပျ ဘာသာပွနျရေးသား လိုကျပါတယျ ခငျဗြာ။
Pfizer ကာကှယျေ ဆးက ကိုဗဈ−၁၉ ကို တားဆီးနိုငျစှမျး ရှိပါတယျ လူ ၄၀,၀၀၀ (လေးသောငျး) ကြျောပါဝငျတဲ့ ဆေးသိပ်ပံ စမျးသပျခကျြအရ ဆေးထိုးထားလြှငျ ကိုဗဈရောဂါကို ၉၅ % တားဆီးနိုငျစှမျး ရှိပါ တယျ (ကမ်ဘာ့ ကနျြးမာရေးအဖှဲ့က သတျမှတျထားတဲ့ ၇၀% ထကျ မြားစှာပိုကောငျးပါတယျ.)
ကာကှယျဆေးကို ၁၆ နှဈွ ပညျ့ပွီးသူ မြားတှငျ ၂၁ ရကျခွားပွီး ၂ ကွိမျထိုးနိုငျပါတယျ။
Pfizer ကုမ်ပဏီ ထုတျ ကာကှယျေ ဆးမြားနဲ့ ဓါတျမတညျ့သူမြား၊ ရကျ ၉၀ အတှငျး ကိုဗဈ ဖွဈဖူးသူမြား၊ ကိုဗဈ သံသယ လူနာမြား၊ ကိုယျခံအားနညျး ရောဂါရှငျမြား၊ သှေးကြဲဆေး သောကျေ နသူမြား၊ နို့တိုကျမိခငျမြား ၊ ကိုယျဝနျဆောငျမြား မှတျခကျြ။ အထကျပါအုပျစုမြားမှာ ဆရာဝနျထောကျခံလြှငျ ဆေးထိုးနိုငျပါတယျ။
ဆေးထိုးသညျ့ေ နရာတှငျ နာကငျြ (သို့) အောငျ့ နခွေငျး၊ ဆေးထိုးသညျ့ နရောတှငျ ရောငျရမျးခွငျး၊ အဖြားငှငှေ့တေ့ကျခွငျး၊ နှမျးလခြွငျး၊ ခမျြးတုနျခွငျး၊ ခေါငျးကိုကျခွငျး။ ကနြျောကိုယျတိုငျ ဆေးထိုးပွီးနောကျ လကျမောငျးအောငျ့သလို ခံစားရပွီး၊ နောကျရကျ ပွနျကောငျးသှားပါတယျ။
(၅) ဆေးဓါတျ မတညျ့ခွငျး (allergic reaction) ဖွဈရငျတော့ နီးစပျရာ ဆေးရုံကို အမွနျ သှားသငျ့ပါတယျ။
ကပျရောဂါကွီး နိဂုံးခြုပျပွီး ပုံမှနျ အနအေထာွး ပနျရောကျဖို့ မွနျမာနိုငျငံကို ‘ဆေး’ အမွနျဆုံးရောကျရှိအောငျ ဆုတောငျးနပေါတယျ ခငျဗြာ
ကာ ကွယ်ဆေး ဘယ်လောက်ေ ကာင်းလဲ။ ဘယ်သူေ တွ ထိုးနိုင်လဲ။ ဘာတွေ ပြင်ဆင် ထားသင့်လဲ ဆိုတာကို မြန်မာလို အတိုချုပ် ဘာသာပြန်ရေးသား လိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
Pfizer ကာကွယ်ေ ဆးက ကိုဗစ်−၁၉ ကို တားဆီးနိုင်စွမ်း ရှိပါတယ် လူ ၄၀,၀၀၀ (လေးသောင်း) ကျော်ပါဝင်တဲ့ ဆေးသိပ္ပံ စမ်းသပ်ချက်အရ ဆေးထိုးထားလျှင် ကိုဗစ်ရောဂါကို ၉၅ % တားဆီးနိုင်စွမ်း ရှိပါ တယ် (ကမ္ဘာ့ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့က သတ်မှတ်ထားတဲ့ ၇၀% ထက် များစွာပိုကောင်းပါတယ်.)
ကာကွယ်ဆေးကို ၁၆ နှစ်ြ ပည့်ပြီးသူ များတွင် ၂၁ ရက်ခြားပြီး ၂ ကြိမ်ထိုးနိုင်ပါတယ်။
Pfizer ကုမ္ပဏီ ထုတ် ကာကွယ်ေ ဆးများနဲ့ ဓါတ်မတည့်သူများ၊ ရက် ၉၀ အတွင်း ကိုဗစ် ဖြစ်ဖူးသူများ၊ ကိုဗစ် သံသယ လူနာများ၊ ကိုယ်ခံအားနည်း ရောဂါရှင်များ၊ သွေးကျဲဆေး သောက်ေ နသူများ၊ နို့တိုက်မိခင်များ ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များ မှတ်ချက်။ အထက်ပါအုပ်စုများမှာ ဆရာဝန်ထောက်ခံလျှင် ဆေးထိုးနိုင်ပါတယ်။
(၄) ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ
ဆေးထိုးသည့်ေ နရာတွင် နာကျင် (သို့) အောင့် နေခြင်း၊ ဆေးထိုးသည့် နေရာတွင် ရောင်ရမ်းခြင်း၊ အဖျားငွေ့ငွေ့တက်ခြင်း၊ နွမ်းလျခြင်း၊ ချမ်းတုန်ခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း။ ကျနော်ကိုယ်တိုင် ဆေးထိုးပြီးနောက် လက်မောင်းအောင့်သလို ခံစားရပြီး၊ နောက်ရက် ပြန်ကောင်းသွားပါတယ်။
(၅) ဆေးဓါတ် မတည့်ခြင်း (allergic reaction) ဖြစ်ရင်တော့ နီးစပ်ရာ ဆေးရုံကို အမြန် သွားသင့်ပါတယ်။
ကပ်ရောဂါကြီး နိဂုံးချုပ်ပြီး ပုံမှန် အနေအထာြး ပန်ရောက်ဖို့ မြန်မာနိုင်ငံကို ‘ဆေး’ အမြန်ဆုံးရောက်ရှိအောင် ဆုတောင်းနေပါတယ် ခင်ဗျာ
ကွာခြိနျ ၆ နာရီ ထဲနဲ့ အပွီးဆောကျနိုငျတဲ့ အလနျးစား အိမျလေး တဈလုံး(ရုပျသံ)
ဂုဏျသိက်ခာ….( စကားလုံးတှေ အမြားကွီးတော့ မပါဘူး…ဒါပမေယျ့ )